सोनिका रोकायमाथि पानीभित्रै यस्तोसम्म गर्ने को हुन् यी युवा? (हेर्नुहोस भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/सोनिका रोकायमाथि पानीभित्रै यस्तोसम्म गर्ने को हुन् यी युवा? (हेर्नुहोस भिडियो)
सोनिका रोकायले नदीमा पौडि खेलिरहेको एक भिडियो आफ्नो युट्युव च्यानलमा राखेकी छिन् । उनीसँग अर्का एक युवा पनि मस्ती गरिरहेका देखिन्छन् । ती युवालाई उनले आदित्य भनेर चिनाएकी छिन् ।
सोनिकाले उक्त भिडियो आफ्नै बझाङस्थित गाउँको रहेको बताएकी छिन् । उनले भिडियो देखिएका अन्य युवा युवती र बालबालिका रोकाय फ्यामिलीको भएको बताएकी छिन् । उक्त भिडियोमा आदित्यसँग उनले पानी भित्र र बाहिर मस्ती गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौका सडकमा वाउ नेपाल भन्दै दुई अर्थी शब्द दिने कुरा गर्दै हिड्ने सोनिका रोकाय पछिल्लो समय भने पुरै परिवर्तन भएकी छन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित छन् । उनी पहिलो लकडाउन सुरु हुनासाथ आफ्नो गृहजिल्ला बझाङ पुगेकी थिइन् ।